Frýdštejn - Ngwudata egwu na mgbasa ozi maka vidiyo vidio YouTube ma ọ bụ ọrụ multimedia
HomePosts tagged "Frýdštejn"
Njem nleta na Frýdštejn Castle .... Obodo kachasị elu bụ ụlọ elu nnukwu ụlọ, nke e wuru n'elu nkume nkume kachasị elu, site na ebe a pụrụ ịhụ ya na ndagwurugwu ahụ. Ụlọ elu ahụ bụ 15 mita elu, na nkezi
Little Rock na Frydstejn
Mkpọmkpọ ebe nke Frýdštejn Castle bụ otu n'ime ụlọ elu atọ dị n'ógbè Jablonec. Anyị amaghị kpọmkwem oge ntọala. Anyị amaghị ọbụna mgbe e kere agbụrụ Frydstein. Otú ọ dị, anyị maara na ọ bụ ihe onwunwe nke Markvartic. N'afọ